RSS EDT 16:03
Links Exchange	Life Style वाह ! दामन सूर्यको बिहानी किरण, हिमालसँग मितेरी अनि सुरिलो हावामा कावा खान चाहिरहनु भएको छ ? यदि, हो भने धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन । दामन तपाईंले खोजेजस्तै सुन्दर र सजिलो गन्तव्य हुन सक्छ । जहाँ वसन्त याममा लाली गुराँससँग पिरती साट्न सकिन्छ । अनि पुस, माघ र फागुनतिर भने हिउँसँगको स्पर्शमा रमाउन सकिन्छ । 'हावामा कावा खान'का लागि भने कुनै सिजन कुरिरहनु नै पर्दैन । निरन्तर बगिरहन्छ हावाको सिरेटो । २ हजार ५ सय ८४ मिटरको उचाइमा रहेको दामनमा २ हजार ४ सय २६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । धार्मिक, जैविक एवं प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण यो ठाउँ मकवानपुर जिल्लामा पर्छ । दामनसँग विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यहरु पनि जोडिएका छन् । काठमाडांैबाट करिब ३ घण्टामा पुग्न सकिने दामन क्षेत्र पयर्टकीय आकर्षणको नमूना हो । प्राकृतिक सुन्दरताको अप्सराजस्तै लाग्छ यो ठाउँ । त्यसैले त वर्षभरि नै पर्यटकहरुको घुइँचो लाग्छ । त्रिभुवन राजपथ, दक्षिणकालीबाट कुलेखानी हुँदै वा थानकोटको चन्द्रागिरि हुँदै यो क्षेत्र पुग्न सकिन्छ । मकवानपुरको उत्तरी भेगमा अवस्थित दामन वरपर अझै धेरै दिन बिताउनेहरुका लागि पालुङ, बज्रबाराही तथा चित्लाङलाई गन्तव्यका सम्भावित अरु विकल्प हुन सक्छन् । सिमभञ्जयाङको सेरोफेरोले जो कोहीलाई मोहित पार्छ । जाडोमा हिउँ खेल्न र पिकनिकका लागि समेत उपयुक्त ठाउँ हो यो । गर्मी याममा भने लालीगुराँस मुटुभरि सजाउनु त छँदैछ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष त के भने, दामन मौसमी गन्तव्य होइन, त्यसैले जुनसुकै समयमा पनि दामन जान सकिन्छ । जाडो होस् वा गर्मी, वषर्ा होस् वा हिउँद । घुमन्तेहरुका लागि बाह्रै महिना खुल्ला छ दामन । यहाँबाट विश्वका उत्कृष्ट १४ हिमालमध्ये आठ वटा देख्न सकिन्छ । थरिथरिका रङ बोकेका लाली गुराँसले वसन्तको वैशलाई स्वर्ग बनाएका हुन्छन् । परम्परागत रीतिरिवाज, भेषभूषा, रहनसहन, बसोबासजस्ता अनेक कुरा यहाँ देख्न सकिन्छ । विशेषतः नेवारी र तामाङ समुदायका मानिसहरु धेरै भएकाले उनीहरुको मौलिक पहिचानलाई पनि नियाल्न सकिन्छ । दामनबाट दुई घण्टाको यात्रापश्चात् मानवनिर्मित इन्द्र सरोवरसम्म पनि पुग्न सकिन्छ । दामन-पालुङमा अहिले होमस्टे कार्यक्रम पनि सुरु भइसकेको छ, जसले यात्रालाई थप रमाइलो बनाउने छ । सुविधासम्पन्न होटल र रिसोर्टहरुको व्यवस्था भएकाले खाना र रात गुजार्ने चिन्ता गरिरहनु पर्दैन । प्रकृतिसँग लडीबुडी गर्न रुचाउने र हावाको झोक्कासँगै रमाउनेहरुका लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट गन्तव्य हो यो । दामनबाट सुन्दर हिमश्रृङ्खलाको अवलोकन, बिहानीपख हेर्न पाइने 'सन राइज'को दृश्य पनि कम रोचक देखिँदैन । 'सन राइज' र वरपरका रमाइला बस्ती तथा कृषि फार्महरु सुन्दरता नियाल्नका लागि 'भ्यु टावर' पनि छ । जहाँको दूरबीनबाट आँखै अगाडि हिमाल, गाउँबस्ती र रमाइला कृषि फार्महरुको सुन्दरताको आनन्द लिन सकिन्छ । दामन-पालुङ क्षेत्रलाई लाली गुराँस, सुनगाभाजस्ता फूलहरुले सिँगारिरहेको देखिन्छ । प्रकृतिसँगको लडिबुडीबाट आनन्द लिएपछि आफैँ ओठबाट फुट्छ, 'वाह ! दामन ।' Last Updated : 2012-05-02 10:38:26 | Text Size : Print E-mail Related Photos